Astaamaha Gabadha Sida Dhabta Ah Kuu Jecel (Haddii Aysan Calaamadahan Lahayn Kuma Jecla) - Aayaha
Aayaha editorSeptember 5, 2019
Waa dareen u wanaagsan nin kasta oo hela haweeney si dhab ah u jecel, haweeneydaa oo uusan marnaba ka shalaayi doonin guursigeeda.
Waa kuwaan 4 calaamadood oo lagu garto haweeneyda sida dhabta ah kuu jecel.
Way ku aamintaa iyadoo aanan eegin wixii ay soo martay
Gabadha wanaagsan waa tan ku aaminta iyadoo ay jirto in xiriiradii ay horey usoo martay si daran loogu soo dhaawacay. Dhib malahan wixii silac iyo dhibaato ay usoo geysteen jeceeladii hore.
Wali way ku aamintaa.
Waxay diyaar u tahay inay nafta kuu hurto
Gabadha sida dhabta ah kuu jecel waa tan kuu hurto baahiyaheeda si ay adiga kuu caawiso. Waxay leedahay qalbi ku caawiya isla markaana ku taageera iyadoo ay jiraan waxyaabo kale oo muhiim ah oo ay nafteeda u sameyn karto.
Waa qof naxariis iyo Samir badan dhib malahan sidaad u dhib badantahay
Way kuu heelantahay inkastoo aad xumeysid adiga. Ma qaadato boorsooyinkeeda si ay uga tagto guriga mar kasta oo aad isku dhacdaan sababtoo ah waxay ogtahay isla markaana rumeysantahay inaad tahay kan iyada loogu talagalay.
Sidoo kale waa qof garasho leh iyadoo ku cafisa mar kasta oo aad ka raalli geliso qalad aad ku sameysay.
Waxay kuusoo bandhigtaa ehelkeeda iyo saaxiibadeed
Waad aamini kartaa haweeneyda si xornimo iyo geesinimo leh kuu barta saaxiibadeed iyo qoyskeeda. Run ahaantii tan micnaheeda maahan inay aad kuu jeceshahay kaliya balse waxaa sidoo kale dhab ka ah xiriirka.
Sidaa darteed waligaa haka shakinin gabar noocaan ah sababtoo waxaa ka go’an inay kula saldhigato isla markaana aad qoys wada aasaastaan.